विदेशबाट आउने नेपालीलाई २५ तोला सुन ल्याउन छुट::देश र जनताप्रति समर्पित
नयाँ व्यवस्थाअनुसार दुई सय ५० ग्रामसम्मका गहना ल्याउन पाइनेछ । ५० ग्रामसम्म सुनका गहना ल्याउँदा शुल्क लाग्दैन । थप एक सय ग्राम ल्याउँदा प्रति १० ग्रामको ७ हजार दुई सय रुपैयाँ लाग्छ । बाँकी एक सय ग्रामको ९ हजार रुपैयाँ लाग्नेछ । यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा छ ।
आगामी वर्ष २०७६ सालमा कुन- कुन दिन बैंकहरू बन्द रहनेछन् ?
रेष्टुरेन्टमा यसरी ठगिदैछन ग्राहक
होसियार यस्ता मानिसले सुन लगाउनै हुदैन ! हुनेछ मात्र हानी
बागलुङका युवा थापा ,विदेशको मोह त्यागेर कृषिमा बागलुङ गलकोट नगरपालिका–७ मल्म, टोकरीका थापालाई शुरुमा विसं २०६५ तिर कोरियाको मोहले तान्यो । स्नातकको पढाइ बीचमै छाडेर भाषा पढ्न थाले । कोरियाको सपना...
जुम्ली स्याउले बजार पाएपछि जाजरकोटमा भारतीय स्याउ बजार पाउन छाडे जुम्ली स्याउले बजार पाएपछि जाजरकोटमा भारतीय स्याउ बजार पाउन छाडेको छ । जिल्लाका सबै ठाउँमा जुम्ली स्याउले बजार पाएपछि भारतीय स्याउ बिक्री हुन छाडेको...